Somaliland.Org » Gabiley wax yar oo fudud inay ku ficiltanto waan ka wacdiyayaa” Xaaji Cabdi Waraabe
October 28th, 2008 Comments Off Gabiley wax yar oo fudud inay ku ficiltanto waan ka wacdiyayaa”
Xaaji Cabdi waxa uu Dadweynaha Gobolka Saaxil ku amaanay siday uga qaybgaleen Diiwaangelinta, isaga oo ugu baaqay Dadweynaha ku dhaqan Gobolka Awdal in ay la yimaadaan dedaal dheeri ah, isla markaana laga hortego rabshado kale oo dhaca. Waxaanu sheegay in Sanaaduuqda codaynta iyo is-diiwaangelinta halkii la geeyaaba ay tahay Somaliland. “Magaalada loogu horraysiiyay ee Berbera salaan baanu u diraynaa nabadgelyada iyo sida wanaagsan ee ay isu-diiwaangelisay, iyada oo ay muddadu ku yarayd oo aanay is-diiwaangelintii dhammaynin. Gobolka imika ku jira shaqada (Awdal) waxa laga doonayaa in uu ka sii kordhiyaa oo Carruur baa yaac-yaacaysa iyo waxaas laga daayaa oo dhabaqa laga ilaaliyaa. Meesha Sanduuqa la dhigayo wax lagu murmo maaha, maanta nin loogu guri maayo, wax nin leeyahay maaha, wax la kala badsanayo maaha, wax Xisbi leeyahay maaha ee caamka Somaliland ayaa loogu gurayaa ee Magaceena” ayuu yidhi X. Cabdi-Waraabe. Waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Sanduuqa halkee la dhigaa iyo halkee la dhigaa cibro ma laha oo meeshii la dhigaaba waa Somaliland. Kolka codayntu inaga dhacdo, halkii sixid u baahanba waa la saxayaa, laa